ဝိဇ္ဇာ နှင့် ဝိမုတ္တိ
၁. အသျှင်ဂေါတမ အကျွန်ုပ်သည် အရံကို အမှီပြု၍ နေလေ့ရှိပါ၏၊ ပရိသတ်၌ ကျက်စားပါ၏၊ ဆွမ်းစားပြီးနောက် နံနက်စာ စားပြီးသောအကျွန်ုပ်အား ‘အရံတစ်ခုမှ အရံတစ်ခုသို့ ဥယျာဉ်တစ်ခုမှ ဥယျာဉ်တစ်ခုသို့ လှည့်လည်သွားလာခြင်း၊ ထိုထိုဤဤ လှည့်လည်ခြင်း’ဟူသော ဤအကျင့် ရှိပါ၏၊ ထိုအကျွန်ုပ်သည် ထိုအရံဥယျာဉ်တို့၌ ဤသို့ ဝါဒတင်ခြင်းမျိုးမှ လွတ်မြောက်ခြင်းအကျိုးလည်းရှိသော သူတစ်ပါးတို့အပေါ်၌ ခြုတ်ခြယ်ခြင်းအကျိုးလည်းရှိသော စကားကို ပြောဆိုနေကုန်သောအချို့ သမဏဗြာဟ္မဏတို့ကိုတွေ့မြင်ရပါ၏၊အသျှင်ဂေါတမသည်ကား အဘယ်အကျိုးရှိ၍ နေပါသနည်း”ဟု (လျှောက်၏)။
ကုဏ္ဍလိယ မြတ်စွာဘုရားသည် အသိဉာဏ် ‘ဝိဇ္ဇာ’၊ (ကိလေသာမှ) လွတ်မြောက်မှု ‘ဝိမုတ္တိ’အကျိုးအာနိသင်ရှိ၍သာ နေ ၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၂. အသျှင်ဂေါတမ အဘယ်တရားတို့ကို ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သည်ရှိသော်အသိဉာဏ် ‘ဝိဇ္ဇာ’၊ (ကိလေသာမှ) လွတ်မြောက်မှု ‘ဝိမုတ္တိ’ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ပါကုန်သနည်း။
ကုဏ္ဍလိယ့ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့ကို ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သည်ရှိသော် အသိဉာဏ် ‘ဝိဇ္ဇာ’၊ (ကိလေသာမှ) လွတ်မြောက်မှု ‘ဝိမုတ္တိ’ ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ပါကုန်၏။
၂.၁. ကုဏ္ဍလိယ အဘယ်သို့ ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သော ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့သည်အသိဉာဏ် ‘ဝိဇ္ဇာ’ (ကိလေသာမှ) လွတ်မြောက်မှု ‘ဝိမုတ္တိ’ ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကုန်သနည်း။
ကုဏ္ဍလိယ ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းကို မှီသော စွဲမက်မှု ‘ရာဂ’ ကင်းခြင်းကိုမှီသော ချုပ်ခြင်းကို မှီသော နိဗ္ဗာန်သို့ ညွတ်သော သတိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများ၏။ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းကိုမှီသော စွဲမက်မှု ‘ရာဂ’ ကင်းခြင်းကို မှီသော ချုပ်ခြင်းကို မှီသော နိဗ္ဗာန်သို့ ညွတ်သော ဓမ္မဝိစယသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများ၏။ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းကိုမှီသော စွဲမက်မှု ‘ရာဂ’ ကင်းခြင်းကို မှီသော ချုပ်ခြင်းကို မှီသော နိဗ္ဗာန်သို့ ညွတ်သော ဝီရိယသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများ၏။ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းကိုမှီသော စွဲမက်မှု ‘ရာဂ’ ကင်းခြင်းကို မှီသော ချုပ်ခြင်းကို မှီသော နိဗ္ဗာန်သို့ ညွတ်သောပီတိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများ၏။ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းကိုမှီသော စွဲမက်မှု ‘ရာဂ’ ကင်းခြင်းကို မှီသော ချုပ်ခြင်းကို မှီသော နိဗ္ဗာန်သို့ ညွတ်သော ပဿဒ္ဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများ၏။ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းကိုမှီသော စွဲမက်မှု ‘ရာဂ’ ကင်းခြင်းကို မှီသော ချုပ်ခြင်းကို မှီသော နိဗ္ဗာန်သို့ ညွတ်သော သမာဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများ၏။ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းကိုမှီသော စွဲမက်မှု ‘ရာဂ’ ကင်းခြင်းကို မှီသော ချုပ်ခြင်းကို မှီသော နိဗ္ဗာန်သို့ ညွတ်သောဥပေက္ခာသမ္ဗောဇ္ဈင် ကို ပွါးများ၏။
ကုဏ္ဍလိယ ဤသို့ ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သော ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့သည်အသိဉာဏ် ‘ဝိဇ္ဇာ’ (ကိလေသာမှ) လွတ်မြောက်မှု ‘ဝိမုတ္တိ’ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၃. အသျှင်ဂေါတမ အဘယ်တရားတို့ကို ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သည်ရှိသော် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ပါကုန်သနည်း။
ကုဏ္ဍလိယ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတို့ကို ပွါးများအပ်ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သည်ရှိသော် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကုန်၏။
၃.၁. ကုဏ္ဍလိယ အဘယ်သို့ ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သော သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး တို့သည်ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကုန်သနည်း။
ကုဏ္ဍလိယ ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် ပြင်းစွာ အားထုတ်လျက် ဆင်ခြင်ဉာဏ် ‘သမ္ပဇဉ်’အောက်မေ့မှု ‘သတိ’ နှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ လောက၌ မက်မောမှု ‘အဘိဇ္ဈာ’နှလုံးမသာမှု ‘ဒေါမနဿ’တို့ကို ပယ်ဖျောက်၍ ရုပ်အပေါင်း၌ ရုပ်အပေါင်းကို အဖန်ဖန် ရှုလျက် နေ၏။
ပြင်းစွာ အားထုတ်လျက် ဆင်ခြင်ဉာဏ် ‘သမ္ပဇဉ်’အောက်မေ့မှု ‘သတိ’ နှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ လောက၌ မက်မောမှု ‘အဘိဇ္ဈာ’နှလုံးမသာမှု ‘ဒေါမနဿ’တို့ကို ပယ်ဖျောက်၍ ဝေဒနာတို့၌ ဝေဒနာအပေါင်းကို အဖန်ဖန် ရှုလျက် နေ၏။
ပြင်းစွာ အားထုတ်လျက် ဆင်ခြင်ဉာဏ် ‘သမ္ပဇဉ်’အောက်မေ့မှု ‘သတိ’ နှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ လောက၌ မက်မောမှု ‘အဘိဇ္ဈာ’နှလုံးမသာမှု ‘ဒေါမနဿ’တို့ကို ပယ်ဖျောက်၍ စိတ်၌ စိတ်ကို အဖန်ဖန် ရှုလျက် နေ၏။
ပြင်းစွာ အားထုတ်လျက် ဆင်ခြင်ဉာဏ် ‘သမ္ပဇဉ်’ အောက်မေ့မှု ‘သတိ’ နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ လောက၌ မက်မောမှု ‘အဘိဇ္ဈာ’ နှလုံးမသာမှု ‘ဒေါမနဿ’တို့ကို ပယ်ဖျောက်၍သဘောတရားတို့၌ သဘောတရားတို့ကို အဖန် ဖန် ရှုလျက် နေ၏။
ကုဏ္ဍလိယ ဤသို့ ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သော သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတို့သည် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကုန်၏။
၄. အသျှင်ဂေါတမ အဘယ်တရားတို့ကို ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သည်ရှိသော် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ပါကုန်သနည်း။
ကုဏ္ဍလိယ ကောင်းသောအကျင့် ‘သုစရိုက်’ သုံးပါးတို့ကို ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သည်ရှိသော် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကုန်၏။
၄.၁. ကုဏ္ဍလိယ အဘယ်သို့ ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သော ကောင်းသောအကျင့် ‘သုစရိုက်’ သုံးပါးတို့သည် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကုန်သနည်း။
ကုဏ္ဍလိယ ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် ကိုယ်ဖြင့် ပြုအပ်သော မကောင်းသောအကျင့် ‘ကာယဒုစရိုက်’ ကို ပယ်၍ ကိုယ်ဖြင့် ပြုအပ်သော ကောင်းသောအကျင့် ‘ကာယသုစရိုက်’ ကို ပွါးများ၏၊ နှုတ်ဖြင့် ပြုအပ်သော မကောင်းသောအကျင့် ‘ဝစီဒုစရိုက်’ ကို ပယ်၍ နှုတ်ဖြင့် ပြုအပ်သောကောင်းသောအကျင့် ‘ဝစီသုစရိုက်’ ကို ပွါးများ၏၊ စိတ်ဖြင့် ကြံအပ်သော မကောင်းသောအကျင့် ‘မနောဒုစရိုက်’ ကို ပယ်၍ စိတ်ဖြင့် ပြုအပ်သော ကောင်းသောအကျင့် ‘မနောသုစရိုက်’ ကိုပွါးများ၏။
ကုဏ္ဍလိယ ဤသို့ ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သော ကောင်းသောအကျင့် ‘သုစရိုက်’ သုံးပါးတို့သည် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကုန်၏။
၅. အသျှင်ဂေါတမ အဘယ်တရားတို့ကို ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သည်ရှိသော်ကောင်းသောအကျင့် ‘သုစရိုက်’ သုံးပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ပါကုန်သနည်း။
ကုဏ္ဍလိယ ဣနြေ္ဒစောင့်စည်းမှု ‘ဣန္ဒြိယသံဝရသီလ’ ကို ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်ကုန်သည်ရှိသော် ကောင်းသောအကျင့် ‘သုစရိုက်’ သုံးပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကုန်၏။
၅.၁. ကုဏ္ဍလိယ အဘယ်သို့ ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်သော ဣနြေ္ဒစောင့်စည်းမှု ‘ဣန္ဒြိယသံဝရသီလ’ သည် ကောင်းသောအကျင့် ‘သုစရိုက်’ သုံးပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေနိုင်သနည်း။
ကုဏ္ဍလိယ ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် မျက်စိဖြင့် နှစ်သက်ဖွယ်အဆင်း ‘ရူပါရုံ’ကို မြင်သည်ရှိသော် မမက်မော၊ မရွှင်ပျ၊ စွဲမက်မှု ‘ရာဂ’ မဖြစ်။ ထိုရဟန်း၏ နာမကာယသည်လည်း (ကမ္မဋ္ဌာန်း) အာရုံ (အဇ္ဈတ္တ) ၌ တည်၏၊ စိတ်သည်လည်း (ကမ္မဋ္ဌာန်း) အာရုံ (အဇ္ဈတ္တ) ၌ တည်၏၊ ကောင်းစွာတည်၏၊ (ကိလေသာမှ) ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်၏၊ မျက်စိဖြင့် မနှစ်သက်ဖွယ် အဆင်း ‘ရူပါရုံ’ ကိုမြင်သည်ရှိသော် မျက်နှာမသာယာမှု မဖြစ်၊ (ကိလေသာ၏ အစွမ်းဖြင့်) တည်သော စိတ် မရှိ၊ ဆင်းရဲသော စိတ်မရှိ၊ ဖျက်ဆီးတတ်သော ‘ဒေါသ’စိတ် မရှိ၊ ထိုရဟန်း၏ နာမကာယသည်လည်း (ကမ္မဋ္ဌာန်း) အာရုံ (အဇ္ဈတ္တ) ၌ တည်၏၊ စိတ်သည်လည်း (ကမ္မဋ္ဌာန်း) အာရုံ (အဇ္ဈတ္တ) ၌ တည်၏၊ ကောင်းစွာ တည်၏၊ (ကိလေသာမှ) ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်၏။
ကုဏ္ဍလိယ နောက်တစ်မျိုးကား ရဟန်းသည် နားဖြင့် အသံ ‘သဒ္ဒါရုံ’ ကို ကြားသည်ရှိသော်။ပ။
နှာခေါင်းဖြင့် အနံ့ ‘ဂန္ဓာရုံ’ ကို နမ်းသည်ရှိသော်။ပ။ လျှာဖြင့် အရသာ ‘ရသာရုံ’ ကို လျက်သည်ရှိသော်။ပ။
ကိုယ်ဖြင့် အတွေ့အထိ ‘ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ’ ကို တွေ့ထိသည်ရှိသော်။ပ။ စိတ်ဖြင့် နှစ်သက်ဖွယ်သော သဘော ‘ဓမ္မာရုံ’ ကို သိသည်ရှိသော် မမက်မော၊ မရွှင်ပျ၊ စွဲမက်မှု ‘ရာဂ’ မဖြစ်။ ထိုရဟန်း၏ နာမကာယသည်လည်း (ကမ္မဋ္ဌာန်း) အာရုံ (အဇ္ဈတ္တ) ၌ တည်၏၊ စိတ်သည်လည်း (ကမ္မဋ္ဌာန်း) အာရုံ (အဇ္ဈတ္တ) ၌ တည်၏၊ ကောင်းစွာ တည်၏၊ (ကိလေသာမှ) ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်၏။ စိတ်ဖြင့် မနှစ်သက်ဖွယ်သော သဘော ‘ဓမ္မာရုံ’ ကို သိသည်ရှိသော် မျက်နှာမသာမှု မဖြစ်၊ (ကိလေသာ၏ အစွမ်းဖြင့်) တည်သော စိတ်မရှိ၊ ဆင်းရဲသော စိတ် မရှိ၊ ဖျက်ဆီးတတ်သော ‘ဒေါသ’ စိတ် မရှိ၊ ထိုရဟန်း၏ နာမကာယသည်လည်း (ကမ္မဋ္ဌာန်း) အာရုံ (အဇ္ဈတ္တ) ၌ တည်၏၊ စိတ်သည်လည်း (ကမ္မဋ္ဌာန်း) အာရုံ (အဇ္ဈတ္တ) ၌ တည်၏၊ ကောင်းစွာတည်၏၊ (ကိလေသာမှ) ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်၏။
ကုဏ္ဍလိယ ယင်းသို့သောအကြောင်းကြောင့်ပင် ရဟန်းအား မျက်စိဖြင့် အဆင်း ‘ရူပါရုံ’ကို မြင်သည်ရှိသော် နှစ်သက်ဖွယ် မနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သောအဆင်း ‘ရူပါရုံ’တို့၌ နာမကာယသည်လည်း (ကမ္မဋ္ဌာန်း) အာရုံ (အဇ္ဈတ္တ) ၌ တည်၏၊ စိတ်သည်လည်း (ကမ္မဋ္ဌာန်း) အာရုံ (အဇ္ဈတ္တ) ၌ တည်၏၊ ကောင်းစွာတည်၏၊ (ကိလေသာမှ) ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်၏။ နားဖြင့် အသံ ‘သဒ္ဒါရုံ’ကို ကြားသည်ရှိသော်။ပ။
နှာခေါင်းဖြင့် အနံ့ ‘ဂန္ဓာရုံ’ကို နမ်းသည်ရှိသော်။ပ။ လျှာဖြင့် အရသာ ‘ရသာရုံ’ ကို လျက်သည်ရှိသော်။ပ။
ကိုယ်ဖြင့် အတွေ့အထိ ‘ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ’ကို တွေ့ထိသည်ရှိသော်။ပ။ စိတ်ဖြင့် သဘောတရား ‘ဓမ္မာရုံ’ကိုတွေ့ထိ သည်ရှိသော် နှစ်သက်ဖွယ် မနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သော သဘောတရား ‘ဓမ္မာရုံ’ တို့၌နာမကာယသည်လည်း (ကမ္မဋ္ဌာန်း) အာရုံ (အဇ္ဈတ္တ) ၌ တည်၏၊ စိတ်သည်လည်း (ကမ္မဋ္ဌာန်း) အာရုံ (အဇ္ဈတ္တ) ၌ တည်၏၊ ကောင်းစွာ တည်၏၊ (ကိလေသာမှ) ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်၏။
ကုဏ္ဍလိယ ဤသို့ ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်အပ်သော ဣနြေ္ဒစောင့်စည်းမှု ‘ဣန္ဒြိယသံဝရသီလ’ သည် ကောင်းသောအကျင့် ‘သုစရိုက်’ သုံးပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေနိုင်၏။ (သန ၄၆.၆)
၆. ရဟန်းတို့ ဣနြေ္ဒကိုစောင့်စည်းမှုကိုလည်း အကြောင်းရှိ၏ဟု ငါဆို၏၊ အကြောင်းမရှိဟု ငါမဆို။ ဣနြေ္ဒကိုစောင့်စည်းမှု၏ အကြောင်းကား အဘယ်နည်း၊
”အောက်မေ့မှု ‘သတိ’ ဆင်ခြင်မှု ‘သမ္ပဇဉ်’ တည်း”ဟု ဆိုအပ်ရာ၏။
၇. ရဟန်းတို့ အောက်မေ့မှု ဆင်ခြင်မှုကိုလည်း အကြောင်းရှိ၏ဟု ငါဆို၏၊ အကြောင်း မရှိဟု ငါမဆို။ အောက်မေ့မှု ဆင်ခြင်မှု၏ အကြောင်းကား အဘယ်နည်း၊
”အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းမှုတည်း”ဟု ဆိုအပ်ရာ၏။
၈. ရဟန်းတို့ အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းမှုကိုလည်း အကြောင်းရှိ၏ဟု ငါဆို၏၊ အကြောင်း မရှိဟု ငါမဆို။ အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းမှု၏ အကြောင်းကား အဘယ်နည်း၊
”ယုံကြည်မှုတည်း”ဟု ဆိုအပ် ရာ၏။
၉. ရဟန်းတို့ ယုံကြည်မှုကိုလည်း အကြောင်းရှိ၏ဟု ငါဆို၏၊ အကြောင်းမရှိဟု ငါမဆို။ ယုံကြည်မှု၏ အကြောင်းကား အဘယ်နည်း၊
”သူတော်ကောင်းတရား နာကြားရမှုတည်း”ဟု ဆိုအပ်ရာ၏။
၁၀. ရဟန်းတို့ သူတော်ကောင်းတရား နာကြားမှုကိုလည်း အကြောင်းရှိ၏ဟု ငါဆို၏၊ အကြောင်းမရှိဟု ငါမဆို။ သူတော် ကောင်းတရား နာကြားရမှု၏ အကြောင်းကား အဘယ်နည်း၊
”သူတော်ကောင်းကို မှီဝဲမှုတည်း”ဟု ဆိုအပ်ရာ၏။ (အန ၁၀.၆၁)